Iyada oo qaabab badan oo ka mid ah alaabada musqusha ay suuqa ugu jiraan, farshaxanka dusha sare ayaa sidoo kale loo baahan yahay in badan.
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Qaab dhismeedka iyo soosaarida qasabada madow
2021 / 01 / 10 QoondayntaTilmaamaha qasabada 4317 0
Markii ugu horraysay ee aad indha ku xirtay derin qasabada madow jikada, waad ogayd in tani ay tahay qaabkii saxda ahaa ee lagu soo gelin lahaa gurigaaga. Matte madow ayaa ka soo horjeedda ciribtirka cad ee cad, wuxuu ku buuxiyaa xididdada dhuxusha miisaska marmar waana mid ku xiran qalabka kale ee madow. Laakiin muuqaalkani maaha kaliya jikada. Haddii aad diyaar u tahay inaad ku ballaariso jacaylkaaga matte madow meelaha cusub, ha uga fogaan musqusha. WOWOW qasabadaha iyo qalabka qubeyska ayaa si heer sare ah ugu dhameysanaya musqushaada.
Qasabada madow sidoo kale waxay leedahay habab kala duwan. Sida electroplating madow, buufiyo madow iyo madoobaadaan.
Madow Electrophoretic sidoo kale loo yaqaan rinjiga electrophoretic. Astaamaheeda: nooc cusub oo wasakheyn yar, tamar-badbaadin ah, midab ilaalin iyo ka hortag ah. Waxay leedahay dusha sare, caabbinta biyaha wanaagsan iyo iska caabbinta kiimikada. Si fudud loo hawlgalo.
Madowgu waa geedi socod ku dhow tirtirka, waa daaweynta dusha kiimikada. Ujeedada ugu weyn waa in laga sameeyo filim cufan cufan dusha sare si looga hortago qashinka shaqada. Waxaa lagu gartaa hanaan fudud iyo qiimo jaban. Laakiin wasakheynta deegaanka ayaa ah mid halis ah. Nidaamku waa deggan yahay.
Xereen waa in lagu buufiyaa budada balaastigga ah goobta shaqada. Budada waxaa lagu dhejiyaa saxanka birta koronto joogto ah. Faa’iidada ayaa ah inaysan waxyeello u lahayn deegaanka. Waxyeello u lahayn jirka aadanaha. Muuqaal aad u fiican.
Inta badan qasabadaha WOWOW waa kuwo elektaroonig ah oo elektaroonig ah, oo ku raad jooga dusha sare.
“Waan dhaafay wixii aan filayay. Rakibid fudud, cod nasteexo leh oo dhawaaq ah marka qasabaddu daarto, iyo runti indhaha dahabka saxankayga. Martidu had iyo jeer waxay ka faalloodaan muuqaalka xarrago ee tuubada
Hore:: Tilmaamaha sida loo doorto tuubada musqusha ee saxanka wanaagsan Next: Muxuu Yahay Dhamaadka Ugu Caansan ee Qasabadaha Musqusha?
2021 / 02 / 03 4164
2021 / 01 / 28 3320
2021 / 01 / 28 2175
2021 / 01 / 28 3719